Salad kuyingxenye ebalulekile cishe kunoma iyiphi idili, kungakhathaliseki ukuthi silungiselela ukhona yini umkhosi othile nezivakashi eziningi noma nje ukudla kwakusihlwa nomkhaya wakini, isaladi - uyinto ngaphandle lapho ongakwazi ukuzenza. Ekhuluma kwalokho emangalisayo ukuba isidlo esikhulu, isaladi kungenziwa wakhonza njengephayona appetizer ngaphambi "wezikhali esindayo" etafuleni zemikhosi, noma ukuba abe ngumsizi wakhe. Kukholakala ukuthi ulethisi lubaluleke esiswini yethu ku ukugaya of inkambo main. owesifazane ngamunye ekhetha zabo, abanye isaladi Ulungisa itafula okuyilapho ukukhonza kwakhe, okubaluleke kakhulu, ukuthi okuqukethwe kwadingeka ukunambitha izivakashi. Nokho, ungakwazi umxhwele hhayi kuphela ukunambitheka omuhle kakhulu futhi umklamo ongavamile ulethisi, kodwa enhle, izitsha abakhethiwe kahle lokhu dish. A ezihlukahlukene okukhethwa kukho omkhulu - nezitsha isaladi ngabanye, nezitsha isaladi enkulu etafuleni ezivamile amasethi ngoba usinika isaladi assorted noma ukhukhamba assorted, kanye ezihlukahlukene izitsha. Lokhu ezihlukahlukene zobumba-ingilazi kwanele ukubamba ukuvumelana, bese usetha oyithandile isitayela izokhetheka kuncike amakhono Culinary.
Ngaphambi ukupheka ulethisi lisikiwe (kusuka imifino uluhlaza noma uphekwe, inyama kanye nenhlanzi izithako), okuyinto ngenxa uzobe refueled uwoyela noma imayonnaise usoso, udinga ukuba banakekele endishini enkulu, okuzoba elula ukuhlanganisa izithako futhi ngemva kokuba axutshwa ngokuphelele. Lokhu injongo kahle ukukhonza njengephayona isitsha esikhulu ngobumba noma ingilazi obukhulu. udle imifino musa ukushintsha umbala walo kulo, njengoba kungase kwenzeke endishini metal. Ekulesi simo samaholide kakhulu lolungakahleleki hhayi kuyoba ukunikezela eyamukelekayo ngempela ulethisi etafuleni ezivamile. Qiniseka ukuthi isivakashi ngasinye kwakuyindawo lapho singakwazi ukubeka lokhu isaladi - ezimweni eziningi, le ipuleti yokudlela, usayizi okuyinto ikuvumela ukubeka futhi isidlo esikhulu futhi isidlo. Ngo idili ikakhulukazi okuphuma phambili kuyafaneleka ukuba abeke etafuleni ukuze isivakashi ngasinye ehlukile isidlo noma isaladi Pialat.
Mhlawumbe wonke ukugubha ebusika, kodwa ngokuyinhloko ekugubheni kufike uNyaka Omusha, ungenzi ngaphandle salads odumile ezifana, inhlanzi ngaphansi ijazi noboya futhi Olivier. Herring Egqoke iphathelene ezihlukahlukene salads egqinsiwe, futhi supply yayo liyadingeka isidlo flat ngobumba noma ingilazi. ifomu isaladi ngeke ngokuphelele kuncike isidlo lapho empeleni uzobe kwakhiwa - lokhu kungaba round ukudla noma okusaqanda. Ukubukeka ulethisi kukodwa ngempela elikhanyayo ngenxa ungqimba wokugcina beetroot, ezifanele ukuze isidlo umbala omhlophe noma obala. ezahlukeneyo abathandwayo ngengilazi lukathayela. Ngokuvamile inhlanzi ngaphansi isaladi noboya coat eyenziwe isidlo esikhulu, ngiyibeke maphakathi etafuleni, njengoba lenkosi. On amapuleti elincane flat nakhonza abanye salads egqinsiwe, ezifana Mimosa, omunye isaladi ezibucayana "inhlanzi" uhlamvu.
Salad Olivier - itafula zakudala kaNcibijane. Salad abathandekayo, futhi ngakho-ke ifanelwe okuphakelayo ehloniphekile. ukuhlobisa kakhulu kaKhisimusi ithebula crystal isaladi isitsha nge okuqukethwe esihlwabusayo. Kufanele kuqashelwe ukuthi crystal ware cishe konke ukuphila kwakhe wachitha ekhabetheni eshalofini ngoba kufanelekile kuphela kuze kube iholidi ngaphambi samaholide kakhulu, kodwa ngosuku olwandulela uNcibijane, nje omunye wabo. Unyaka omusha ukugubha kuqedile ngaphandle champagne elikhazimulayo ngo crystal, ngakho crystal ukukhonza salads inyama ebandayo ngeke ufane kahle etafuleni iholide.
Uma inhlanzi ngaphansi ijazi noboya, Olivier kanye isaladi kukhona zabuna "namaSoviet", ezifana uKhesari isaladi noma isiGreki esanda kutholakala wathandwa izinhliziyo izakhamuzi zethu nabo. Ngokungangabazeki, igugu elikhulu bayojabulela zonke izivakashi, ngakho feed kuphela kufanele kube ezifanele. Caesar isaladi kufanele uzilungiselele ngokushesha ngaphambi ukusetshenziswa, noma okungenani ifake uphethiloli ufafaze croutons kufanele kube ngakwesokudla ngaphambi kokukhonza. Nge inombolo encane izivakashi kuKhesari isaladi in ngabanye zobumba amapuleti kuyoba inketho impumelelo. Uma unquma ukufaka isaladi etafuleni ezivamile ipuleti kufanelekile kokubili ngokujulile futhi ijulile isaladi isitsha. Kungokufanayo uya for isaladi ngesiGreki: lapho umuntu oletha izithako akufanele zixutshwe, futhi bebonke obujulile ipuleti isaladi kuyoba njenge-yemifino ne ushizi noma ushizi feta.
Kungakhathaliseki salads izitsha ukukhonza ngoba abakhulumayo obakhethayo, kufanele sikhumbule ukuthi zonke izitsha etafuleni iholide kufanele kuhlanganiswe nomunye ukuba nesitayela esifanako. zobumba White kufanelekile noma ngabe isiphi isikhathi, futhi uma kukhona ukungabaza ukuthi uyobheka kakhulu banal kakhulu, ungakwazi ukuhlola ngezithombe ngesimo nezitsha isaladi izitsha. Fashion mkhuba ukuma square izitsha. Okwakhe ekuklanyweni etafuleni kanye salads ukukhonza - kuyisihluthulelo impumelelo yalo mkhosi nalokho esinye isizathu ukuzwa kunconywa bebheke uwayehlalise.
Apollo - imimese nge enamathela elwa namagciwane. Uhlolojikelele, izici kanye nokubuyekeza